30,000 taonina famokarana zezika mitambatra - YiZheng Heavy Machines Co., Ltd.
Ny tsipika famokarana isan-taona misy zezika 30 000 taonina dia fitambarana fitaovana mandroso. Ny vidin'ny famokarana ambany sy ny fahombiazan'ny famokarana avo. Ny tsipika famokarana zezika marobe dia azo ampiasaina amin'ny famolavolana akora samihafa mifangaro. Ary farany, ny zezika mitambatra misy fifantohana sy raikipohy samihafa dia azo omanina arakaraka ny tena filàna, mameno tsara ireo otrikaina ilain'ny voly, ary mamaha ny fifanoherana misy eo amin'ny fangatahana sy ny famatsian-tany.
Tao anatin'izay taona faramparany izay, ny fanjakana dia namolavola sy namoaka andianà politikam-pitiavana hanohanana ny fampandrosoana ny indostrian'ny zezika organika. Arakaraka ny habetsaky ny tinady amin'ny sakafo biolojika no betsaka ny fangatahana. Ny fampitomboana ny fampiharana zezika biolojika dia tsy vitan'ny fampihenana ny fampiasana zezika simika fotsiny, fa koa fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra sy ny fifaninanana amin'ny tsena, ary misy lanjany lehibe amin'ny fisorohana sy fanaraha-maso ny fahalotoan'ny loharano tsy teboka ary ny fampiroboroboana ny fambolena- fanavaozana ny firafitry ny lafiny. Amin'izao fotoana izao, ny orinasa miompana amin'ny fiompiana anaty rano dia nanjary fironana hanao zezika biolojika avy amin'ny excreta, tsy vitan'ny hoe mitaky politika fiarovana ny tontolo iainana, fa koa mitady teboka vaovao hahazoana fampandrosoana maharitra amin'ny ho avy.
Ny fahaizan'ny famokarana zana-pamokarana zezika bitika dia tsy mitovy amin'ny 500 kilao ka hatramin'ny 1 taonina isan'ora.
Ny akora simika amin'ny famokarana zezika mitambatra dia ahitana urea, amonium klôro, amonium sulfate, amoniaka ranon-javatra, monômpôfôfika amoniôma, fôfatô diômônia, potasiôma klôroida, potasioma sulfate, ao anatin'izany ny tanimanga sasany sy ny mpameno hafa.
1. Ny akora akora dia azo ovaina be ary mety amin'ny famolavolana zezika mitambatra, fanafody, indostria simika, famahanana ary akora hafa, ary avo ny tahan'ny granulasi vokatra.
2. Ny loza ateraky ny famokarana dia afaka mamokatra fifantohana isan-karazany, ao anatin'izany ny zezika biolojika, zezika tsy anana, zezika biolojika, zezika andriamby, sns.) Zezika mitambatra.
3. Vidiny ambany, serivisy tena tsara. Ny orinasanay dia manamboatra sy mivarotra irery ho mpivarotra mivantana hanomezana tombony lehibe indrindra ho an'ny mpanjifa amin'ny vidiny tsara indrindra. Ankoatr'izay, raha manana olana ara-teknika na fanontaniana momba ny fivorian'ny mpanjifa izy ireo dia afaka mifandray amintsika ara-potoana ihany koa.
4. Ny zezika mitambatra novokarina tamin'ity andalana famokarana ity dia manana habetsahan'ny fifohana ny hamandoana, mora tehirizina, ary mety indrindra amin'ny fampiharana mekanika.
5. Ny tsipika famokarana zezika mitambatra dia nanangona traikefa teknika an-taonany maro sy ny fahafaha-mamokatra. Ity dia tsipika famokarana zezika mpamokatra herinaratra mahery vaika sy ambany ary novolavolaina, novaina ary novolavolaina, mahomby amin'ny famahana ny olan'ny fahombiazana ambany sy ny vidiny lafo eto an-trano sy any ivelany.
Ny fizotran'ny zana-pamokarana zezika mitambatra dia azo zaraina ho: akora simika, fampifangaroana, granulation, fanamainana, famafana, fanasokajiana sombin-javatra, fonosana vita ary fonosana vita farany.
Araka ny fangatahan'ny tsena sy ny valin'ny famaritana ny tany eo an-toerana, ny urea, ny amonium nitrate, ny amonium klôro, ny amonium thiophosphate, ny amonium phosphate, diammonium phosphate, calcium calcium, potassium chloride (potassium sulfate) ary ireo akora hafa dia nozaraina tamin'ny ampahany iray. Ny additives sy ny soritry singa dia ampiasaina ho singa amin'ny ampahany iray amin'ny alàlan'ny mizana fehikibo. Raha ny tahan'ny raikipohy, ny fikajiana akora rehetra dia mivezivezy avy amin'ny fehikibo mankany amin'ny mixers, dingana iray antsoina hoe premixes. Izy io dia miantoka ny fahamarinan'ny famolavolana ary mahatsapa ireo akora mahomby sy mitohy ary mahomby.
2. akora mifangaro:
Ny mixer marindrano dia ampahany tena ilaina amin'ny famokarana. Manampy ireo akora manta hifangaro tanteraka indray izy ary hametraka ny fototra ho an'ny zezika granular avo lenta sy avo lenta. Mamoaka mixer marindrana tokana-tokana aho ary mpifanaraka marindrano amin'ny axis roa azo isafidianana.
Ny granulation no ampahany lehibe amin'ny tsipika famokarana zezika mitambatra. Ny safidin'ny granulator dia tena zava-dehibe. Ny orinasanay dia mamokatra disk granulator, drum granulator, roller extruder na granulator zezika zezika vaovao. Amin'ity tsipika famokarana zezika mitambatra ity dia misafidy granulator amponga rotary izahay. Aorian'ny fifangaroana ara-drariny ny fitaovana, ny conveyor fehikibo dia entina mankany amin'ny milina granulation drum rotary mba hamenoana ny granulation.
Aorian'ny fampangatsiahana dia mijanona ao anatin'ny vokatra vita ny vovoka vovoka. Ny sombintsombiny tsara sy lehibe rehetra dia azo zahana amin'ny sivana. Ny vovoka manify voasivana dia entina avy any amin'ny conveyor fehikibo mankany amin'ny blender hanetsiketsika ny akora indray hanaovana granulation; raha ny sombintsombiny lehibe izay tsy mahafeno ny fenitry ny sombintsombiny dia mila entina mba hotorotoroin'ny crusher rojo alohan'ny granulation. Ny vokatra vita dia halefa any amin'ny milina fanosotra zezika mitambatra. Izy io dia mamorona tsingerin'ny famokarana tanteraka.